Qhoboshela isihlalo seBelt okanye iTape yeTape: Izixhobo ezitsha zoKhuseleko lwenqwelomoya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Qhoboshela isihlalo seBelt okanye iTape yeTape: Izixhobo ezitsha zoKhuseleko lwenqwelomoya
Airlines • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • Tourism • uthutho • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Itheyiphu yeDuct: Isixhobo esitsha soKhuseleko senqwelomoya
Ngokuphindaphindiweyo, abakhweli beenqwelo moya abangalawulekiyo bayathotywa ngabasebenzi beenqwelo moya kunye neteyipu yomzila. Kwaye kutheni? Yomelele, ikhuselekile, kungoko umama okrelekrele wale mihla wathi kubantwana bakhe: “Iteyiphu ye-tape. Ungashiyi ikhaya ngaphandle kwawo. ”
Iteyiphu yomzila ithathiwe njengokuya kukhuseleko lwenqwelomoya apho kubaluleke kakhulu ukuba umkhweli abanjwe.
Kwinyanga nje ephelileyo iyodwa, ubuncinci iimeko ziye zaqinisekisa ukusetyenziswa kwetape tape ukukhusela abakhweli ngaphandle kolawulo kwizitulo zabo.
Kunokubakho umkhondo kwimfihlakalo yokusetyenziswa okubonakalayo kutsha nje kwetheyiphu ekhwele kwinqwelomoya yomhambi.
I-American Airlines ixele kule veki ngoLwesibini ukuba malunga neyure emva kokuhamba ngenqwelomoya ukusuka eMaui ukuya eLos Angeles, inqwelo moya kuye kwafuneka iphambukiselwe e-Honolulu emva kokuba inkwenkwana eneminyaka eli-13 ubudala iphazamisile.
Amangqina athi le nkwenkwana izamile ukukhaba ifestile ecaleni kwesihlalo sayo kwaye yabanomzimba kanina. Ukuqina kwaqala ukunyuka malunga neyure kwinqwelomoya, kubangela ukuba umqhubi ajike inqwelo moya.
I-airline ithi i-flex cuffs yayisetyenziselwa ukuthintela inkwenkwana, kodwa ividiyo nayo yabonisa ukuba umntu ohamba ngenqwelomoya uyambamba esihlalweni.
Inqwelomoya yafika ikhuselekile, kwaye abakhweli babekwa kwezinye iinqwelomoya okanye banikwa amagumbi ehotele.
Iteyiphu yeDuct: INew New Safety Safety
Ngandlela thile, i-tape tape isuswe njengendawo yokuhamba ngenqwelomoya yokhuseleko lwenqwelomoya apho kubaluleke kakhulu ukuba umkhweli abanjwe ukuze akhusele wonke umphefumlo okhwele. Ayibizi mali kwaphela, igcinwa ngokulula ebhodini ngaphandle kokuthatha indawo ebalulekileyo, kwaye yomelele. Unamandla ngokwaneleyo okugcina umntu ehleli-kwaye ukuba kukho imfuneko, thula-ngelixesha lentsalela yenqwelomoya.
Kwinqaku elihlekisayo, kumdlalo bhanyabhanya onguSista Act 2, omnye wabafundi abakhuphiswano lweekwayala, uFrankie, ubonisa uDade Mary Patrick ingubo yakhe eyaphukileyo eziphuziweyo athi, “Le nto ikrazukile! Ngoku ndiza kwenza ntoni, huh? ” UDade Mary Patrick uphendula ngokuzolileyo: “Mamela, sukukhathazeka. Umama wayedla ngokuthi akukho nto ingenakwenzeka ukuba nje uphethe intwana yokholo kunye nomqulu omkhulu weteyipu yombane. ” Emva koko ukhupha umqulu wekhasethi yesilivere kumkhwa wakhe aze akhuphe intambo enkulu njengoko esithi, "Molo!"
Iziganeko zeTape zeTape zamva nje
Makhe sijonge emva kweziganeko zamva nje zomoya eziphakathi eziphumileyo ngokukhuselekileyo nangokukhuselekileyo konke ngenxa iroli yemilingo ye-tape duct.
Nge-12 kaJulayi, owasetyhini owayehamba ngenqwelomoya kwiAmerican Airlines esuka eDallas-Fort Worth esiya eCharlotte waqhoqhoqho wabanjwa ezihlahleni nasezinyaweni emva koko esihlalweni sakhe, xa oko kwakunganelanga ukumoyisa wazama ukuvula ucango kwinqwelomoya kuba wayengafuni iphinde inyuke. Abalindi beenqwelo-moya enye nayo yalunywa Wamwisa ukuba agcine ukhuseleko lwabakhweli abali-190 ababekhwele.
Nge-3 ka-Agasti, kwaxelwa ukuba uMaxwell Berry, indoda eneminyaka engama-22 ubudala yaseOhio, kuthiwa Bambamba amabele ama-2 abagadi beenqwelomoya ngexesha lenqwelomoya yeFrontier Airlines kwaye ndaphinda ndayibetha okwesithathu. Abahambi beenqwelomoya bamthi chu esitulweni sakhe lonke olo hambo lusuka ePhiladelphia ukuya eMiami. UBerry wabanjwa ngamapolisa akufika kumacala amathathu ebhetri. Amagosa e-FBI kwindawo leyo athe akazukulandela mthetho.
NgokweFrontier, i Abahambi ngenqwelomoya baya kujongana neziphumo zabo, nangona kungacacanga ukuba yintoni. Yonke inqwelo-moya ekufanele ukuba ithi ngelo xesha:
Isalathiso semvelaphi yeTape Tape Mystery
Umbutho wabahambi ngenqwelomoya-i-CWA, emele abagadi beenqwelomoya, baxhasa ngentliziyo iphela isenzo sabasebenzi. Umongameli wombutho wabasebenzi, uSara Nelson, uthe abasebenzi "banyanzelwe ukuba babambe umkhweli ngezixhobo ezikhoyo kubo."
Ngokombutho womanyano, inqwelomoya inika iteyiphu kubasebenzi kwimeko apho bafuna ukubamba umkhweli. UFrontier akazange ayiphendule imibuzo malunga naloo nto.
NgokukaNjingalwazi wezolawulo lweenqwelo moya eMetropolitan State University yaseDenver, uJeff Price, “kuqhelekile ukusebenzisa iteyiphu yokukhusela umntu omele abe sisisongelo kwinqwelo-moya okanye kwabanye.” Ucacisile ukuba ezinye iinqwelomoya zineminye imiqobo ebhodini, ezinje ngeefix cuffs, kwaye uthe uziphatha zombini xa ebhabha "ngesihlandlo esinje."
Ke kubonakala ngathi kusengqiqweni ukucinga ukuba ezinye iinqwelomoya zithe cwaka “zafaka” imiqolo yeteyiphu yeenqwelo-moya kwindawo yazo yokugcina umoya ukuzola nokhuseleko phantsi kolawulo ngelixa iimayile ezingama-36,000 zinyuka. Ndingakrokra ukuba akukho baninzi, ukuba bakho, abakhweli abanokuphikisana naloo nto.